မှနမှာတှေ အတှကှ တောတှောေ လး ရှကဖှို့ကောငှးလာပှီ…. – XB Media Myanmar
မြန်မာတွေ အတွက် ရှက်ဖို့ကောင်းလာပြီ….
အရင်က ဇော်ဂျီသုံးနေရာကနေနိုင်ငံတကာ ခေတ်မီအောင်၊ နိုင်ငံ့အဝှမ်းက သတင်းတွေ ကို လွယ်ကူစွာ သိခွင့်ရရှိအောင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကမ္ဘာက အမှန်တရားအတိုင်းသိခွင့် ရရှိအောင်၊ (ဒီအထဲမှာ အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်မ ပြေမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကျင့်ပျက်မှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့) လွယ်လွယ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင်၊
လျင်လျင်မြန်မြန် translate လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ့် Unocode စံနစ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးြ ပုနေချိန်မှာအင်မတန်စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတစ်ခုကို မနေ့ညက အောင်လအင်န်ဆန်ပွဲ အပြီးမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ စိုးရိမ်တကြီး တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလည်းဆိုရင် ရှုံးနိမ့်သွားသော ပြိုင်ဖက်အပေါ်ကို Hate Speech တွေနဲ့ လှောင်ပြောင်သရော်နေသော Comment တွေ။
ကိုယ် အဲဒီ Comment ပိုင်ရှင်တွေအစား ရှက်လိုက်တာ။ ဒါတွေကိုသာ နိုင်ငံတကာက လွယ်ကူစွာ Translate လုပ်နိုင်နေရင်…အစကတည်းက မြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နိမ့်ကျပြီးသား အခြေအနေတခုနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိူရင် အနီရောင် ပတ်စပို့စ်တွေ့တာနဲ့ အနိမ်ချခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာတွေမှ ထုနဲ့ဒေး။
ဒါကို အမစေုဦးဆောငလြို့ ကိုယကြငွြ့တရားကောငြးမှနသြော လူတစုက ပှနလြညတြညြေ ဆာ ကြေ နတုနြး အခှအနေတခေုပဲ ရှိနပေါသေးတယြ။နိုငငွံသားတှရေဲ့ စိတဓွာတအွဆ ငွ့အတနွးတှကေ တဒငွဂြလှောငပွှောငလွိုစိတနွဲ့ ရေးသား လိုကတွဲ့ Comment ကအစ ပှုလို့ အမုနွးတရားအခှခေံတဲ့ တခှားသော အကှောငွးအရာေ တှကိုသာ နိုငငွံတကာ က လှ ယကွူစှာ Translate လုပနွနေိုငရွငွ…
အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြပ်နှံမှုတွေက မျက်စိကျနေတဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ သီးပွင့်လာမယ့် ကိုယ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ကိုယ်တို့ လူမျိုးအတွက် အခွင့်အလမ်း တွေကို သိက္ခာကျေ စသော၊ နိမ့်ကျစေသော အရေးအသား အပြောအဆိုမျိုးတွေ နည်းနိုင် သမျှ နည်းစေချင်မိ တယ်။
Unicode ပြောင်းဖို့အတွက်ချည်း ဆော်သြခြင်းမဟုတ်ဘဲ အခုလို အကြောင်းအရာမျိုးတွေကို အသိပညာပေးတဲ့ အရေးအသား ဆော်သြမှုမျိုးတွေကို နိုင်သလောက်လေး လုပ်ဆောင် လက်ဆင့်ကမ်းဖို့လည်း လိုအပ်သေးတယ်လို့ တွေးမိတယ်။
Facebook team myanmar အနေနဲ့လည်း အဲဒီလို နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို နိမ့်ကျစေသော အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ အကောင့်တွေကို ဖျက်ချပေးသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုပါ တယ်။ ဘယ် သူမဆို ကိုယ့်လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာကျစေတယ်လို့ သေချာသတိပြုမိကြရင် အဲဒီလို အလား တူလုပ်ရပ်မျိုးတွေကို အမှန်တကယ်ရှက်တတ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိရင်း …. .။မယ္ကိုး
အရင်က ဇော်ဂျီသုံးနေရာကနေနိုင်ငံတကာ ခေတ်မီအောင်၊ နိုင်ငံ့အဝှမ်းက သတင်းတွေ ကို လွယ်ကူစွာ သိခွင့်ရရှိအောင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကမ္ဘာက အမှန်တရားအတိုင်းသိခွင့် ရရှိအောင်၊ (ဒီအထဲမှာ အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကျင့်ပျက်မှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့) လွယ်လွယ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင်၊
လျင်လျင်မြန်မြန် translate လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ့် Unocode စံနစ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြု နေချိန်မှာအင်မတန်စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတစ်ခုကို မနေ့ညက အောင်လအင်န်ဆန်ပွဲ အပြီးမှာကိုယ့်အနေနဲ့ စိုးရိမ်တကြီး တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလည်းဆိုရင် ရှုံးနိမ့် သွားသော ပြိုင်ဖက်အပေါ်ကို Hate Speech တွေနဲ့ လှောင်ပြောင်သရော်နေသော Comment တွေ။ကိုယ် အဲဒီ Comment ပိုင်ရှင်တွေအစား ရှက်လိုက်တာ။ ဒါတွေကိုသာ နိုင်ငံတကာက လွယ်ကူစွာ Translate လုပ်နိုင်နေရင်…
အစကတည်းက မြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နိမ့်ကျပြီးသား အခြေအနေတခုနဲ့ ရပ်တ ည်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိူရင် အနီရောင် ပတ်စပို့စ်တွေ့တာနဲ့ အနိမ်ချ ခံလို က် ရတဲ့ မြန်မာတွေမှ ထုနဲ့ဒေး။ဒါကို အမေစုဦးဆောင်လို့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်သော လူတစုက ပြန်လည်တည် ဆောက်နေတုန်း အခြေအနေတခုပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
နိုင်ငံသားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းတွေက တဒင်္ဂလှောင်ပြောင်လိုစိတ်နဲ့ ရေးသားလိုက်တဲ့ Comment ကအစပြုလို့ အမုန်းတရားအခြေခံတဲ့ တခြားသော အကြောင်းအရာတွေကိုသာ နိုင်ငံတကာက လွယ်ကူစွာ Translate လုပ်နေနိုင်ရင်…
အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြပ်နှံမှုတွေက မျက်စိကျနေတဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ သီးပွင့်လာမယ့် ကိုယ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ကိုယ်တို့ လူမျိုးအတွက် အခွင့်အလ မ်းတွေ ကို သိက္ခာကျစေသော၊ နိမ့်ကျစေသော အရေးအသား အပြောအဆိုမျိုးတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေချင်မိတယ်။
Facebook team myanmar အနေနဲ့လည်း အဲဒီလို နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို နိမ့်ကျစေသော အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ အကောင့်တွေကို ဖျက်ချပေးသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုပါ တယ်။ဘယ် သူမ ဆို ကိုယ့်လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာကျစေတယ်လို့ သေချာသတိပြုမိကြရင် အဲဒီလို အလားတူလုပ်ရပ်မျိုးတွေကို အမှန်တကယ်ရှက်တတ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိရင်း…..။မယ္ကိုး
ဖန်တီးမှုအသစ်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းအသစ်ထွက်ရှိ လာဦးမည့် 4:FOUR အဖွဲ့